| Mutambo Wokushanyira: 045
ZUVA 01 : COCHIN - ATHIRAPALLY
Kusvika paCochin Airport / Railway Station uye kutamira kuAthirapilly - inenge 63 km. Athirapilly Waterfalls inzvimbo yakakurumbira yemapikiniki apo mvura inoputika kubva pakureba kwemafuro anenge 80 isati yasvika kuRwizi Chalakudi. Tarisa kuhotera paunosvika uye upedze zuva rekuzorora. Usiku hunogara huri kurongwa muAthirapally.
ZUVA 02: ATHIRAPALLY - MUNNAR
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya uende kubva kuhotera uende kuNunnar (5 maawa 'motokari) paunosvika uende kuhotera. Shandisa zuva rekuzorora. Usiku hunogara huri kurongwa muNunnar.
ZUVA 03 : MUNNAR
Mushure mekudya kwekudya kwemazuva emangwanani vanopedza zuva nemunharaunda yekuona. Yakatarirwa pamusana pemiti mitatu yemakomo - Mudrapuzha, Nallathanni uye Kundale, Munnar ndeye 1600 Meter pamusoro pegungwa. Ichi chakakwirira chechikomo chakange chave chiri nzvimbo yechando yehurumende yeBritain muSouth India. Nzvimbo yekuona nzvimbo yeNunnar inosanganisira kushanya kuMatpetpetty Dam, Kundale Lake uye Echo Point. Manheru anopfuurira ku Rajamalai apo rarest yemarudzi embudzi yembudzi, "Nilgiri Thars", inogona kuonekwa. Usiku huno huripo hunogadzirirwa Munnar.
ZUVA 04 : MUNNAR - THEKKADY (KUNA MUNA APRX. 110 KMS / 3HRS DRIVE)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya uende kubva kuhotera uende kuThekkady, paunosvika uende kuhotera. Ramba uchienda kunotarisa kuona nzvimbo yeThekkady - imwe yenzvimbo dzinonakidza dzesango dzenyika. IPeriyar yemhuka yemhuka inogara muThekkady inopararira mukati mechikwereti che777 sq iyo iyo 360 sq. Km inzvimbo yakareba yakasvibira musango. Inonzi iyo geomorphology, kusiyana-siyana kwemhuka dzesango uye kunaka kwakanaka, nzvimbo tsvene yakaziviswa kuti Tiger Reserve mu1978. Zvisarudzo zvekuita seBhoating paPeriyar Lake, Spice Plantation kushanyira uye Elephant Ride zvinogona kuitwa pamamwe mari. Usiku hunogara huri kurongwa muThekkady.
ZUVA 05 : THEKKADY - KUMARAKOM (KUNA MUNA APRX. 175 KMS / 4HRS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya uende kubva kuhotera uende ku Kumarakom Tarisa kuhotera. Manheru anowanikwa munzvimbo inoona nzvimbo munzvimbo dzakapoteredza uye kumativi ose Kumarakom - kamudiki kamushure mvura yakasvibiswa kumavirira kumadokero kweVembanadu Lake. Iyo yakasara yemvura yakasakara inopararira pamusoro pe900 sq. Km. Sarudza ngarava, motokari yemotokari kana imba yekutakura uye kuparadza kunaka kweparadhiso iyi yepamvura pakunakira kwayo. Nenguva isipi inogara yakarongeka muK Kumarakom.
ZUVA 06 : KUMARAKOM - COCHIN DEPARTURE (ONE APRAY 60 KMS / 2HRS)
Mangwanani, mushure mekudya kwekudya kwemazuva emangwanani uende kubva kuhotera uende kuChochin Airport / Railway Station nekuda kwekuenda kwako / zvitima kumba, uchinakidzwa nezororo rakanaka iwe waunenge uri mu "God's Own Country".